App grading ho an'ny mpampianatra 2021: 10 fampiharana naoty tsara ho an'ny mpampianatra: vaovaon'ny sekoly ankehitriny
App grading ho an'ny mpampianatra 2021: 10 fampiharana naoty matanjaka indrindra ho an'ny mpampianatra
Filed in Articles by TMLTStaff amin'ny 18 Jona 2021
App grading ho an'ny mpampianatra: ny fiakaran'ny teknolojia finday dia tena niteraka resa-pianarana sy fampianarana tsy manam-paharoa. Ny teknolojia finday dia nanimba ny fetra, nanokatra ny fahafaha-mianatra vaovao, ary, ny tena zava-dehibe, dia nanitatra ny fahafaha-mianatra mba hampiditra ny habaka virtoaly.
Miaraka amin'izany ny fahafaha-manao ary koa ny fahamendrehana momba ny dinamika tempo-jeografika manodidina ny fianarana.
Vokatr'izany, be dia be ny loharanom-pahalalana ho tonga amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra. Ny fanitsiana ny fitsapana, ny fanendrena ary ny taratasy amin'ny tanana dia toa mandreraka be sy mandany fotoana. Maninona raha mandray tanana manampy amin'ny teknolojia?
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanao lisitra fampiharana fampiharana naoty matotra izay afaka manampy ny mpampianatra amin'ny fotoana kely aho.
App fampiharana ho an'ny mpampianatra
1. Kilasy haingana
Ity dia calculatera mora ampiasaina hanampiana anao amin'ny kajy ny isa fanadinana sy ny isan-jato. 'QuickGrader dia fanavaozana lehibe iray avy amin'ny calculatera fanoratana taratasy taloha, misy interface iray azo ampifanarahana tanteraka ary ahitàna ireo fiasa mahery vaika takiana amin'ny efitrano fianarana maoderina ao anatin'izany ny sanda ampaham-bidy.
Ary koa, mizana mizatra azo ovaina, naoty grady / mihena, ary interface tsara izay mora amin'ny masonao. QuickGrader manakana ihany koa ny efijery tsy ho maizina, mamela anao hifantoka amin'ny naoty. '
2. Mpampianatra miara-miasa
Ity fampiharana ity dia atolotry ny mpampianatra be indrindra, ary mora ny mahita ny antony? Satria afaka manampy amin'ny famoronana safidy marobe na quizze misokatra ary koa fandatsaham-bato azo zaraina amin'ny mpampianatra hafa.
Manampy amin'ny naoty izy ity, manome tombana ankapobeny mba hahitana raha sahirana amin'ny sehatra manokana ny mpianatra, ary mamela anao hisintona ny valiny ihany koa.
Ahafahanao mamorona fitsapana sy fanadinana fanombanana haingana ary koa manome anao rafitra manome naoty eo noho eo hijerena ireo angon-drakitra valiny sy hamaritana ny 'fotoana ahafahana mampianatra bebe kokoa'.
Ity dia fampiharana an-tserasera nomerika tena tsara miaraka amina endrika manampy ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra. Google Classroom 'dia natao hanampiana ny mpampianatra hamorona, hanangona ary hanisy marika ny anjara andraikiny tsy misy taratasy, ao anatin'izany ireo fiasa manangom-potoana toy ny fahafaha-manao kopia a Kaonty Google ho an'ny mpianatra tsirairay.
Izy io koa dia mamorona lahatahiry Drive ho an'ny anjarany tsirairay sy ho an'ny mpianatra tsirairay hanampiana hitandrina ny tsirairay. '
Ity koa calculator grady iray hafa tena tsara izay miaraka amina endri-javatra marobe ao anatin'izany ny fahaizana mametraka azy io hiasa amin'ny fanontaniana 100 mahery, mampiseho isa ho isa iray na amin'ny toerana desimal iray, handamina ny valiny ho lasa tsanganana ary maro hafa.
ZipGrade dia fampiharana naoty izay manampy anao hanana fitsapana safidy maro ao anatin'ny minitra. Tsindrio fotsiny ireo fitsapana amin'ny finday finday avo lenta, ary ataon'ny fampiharana ny ambiny.
Mazava ho azy fa tsy ny zava-drehetra dia momba ny naoty. Ity fampiharana ity dia tsy manome naoty afa-tsy; miankina aminao ny hahafantatra izay ilain'ny mpianatra sy ny fanontaniana tokony hazavainao indray.
Fomba tsotra sy mora ihany koa hamoronana ny quiz sy ny fitsapana ary hiasa an-jaridaina ireo mpianatra eny an-dalana. Manolotra takelaka valiny maimaimpoana misy amin'ny endrika sy habe samihafa izy io, mandrindra ny valin'ny isa amin'ny endrika sariaka Excel sy PDF, mandamina isa amin'ny anaran'ny mpianatra sy maro hafa.
Showbie dia sehatra iray izay manambatra fitaovana ilaina rehetra amin'ny andraikitra, fifandraisana ary koa fanehoan-kevitra. Showbie dia manana boky torolàlana mahomby miaraka amina endri-javatra maro hafa.
Azonao atao ny manisy marika sy manome naoty ny asan'ny mpianatrao amin'ny alàlan'ny lisitr'ireo kilasy ao anatin'ny Shared Folder, manome naoty mora foana ny asan'ny mpianatra rehefa mijery azy io, ary manampy isa ho sandany.
Azonao atao koa ny manampy lahatsoratra misy dikany miaraka amin'ny hevitrao. Manana efitrano kely koa ianao hanampiana fanehoan-kevitra an-tsoratra. Fa ny tena mpanangom-potoana dia ny fahaizana manampy fanehoan-kevitra am-peo: rakitsoratra fotsiny!
Azo atao ny mijery haingana ny naotin'ny mpianatra amin'ny alàlan'ny fanendrena, na an-dakilasy na miankina amin'ny tsirairay. Ambonin'izany rehetra izany, afaka mandefa naoty amin'ny rakitra CVS ianao, toy ny HTML, na ao anaty modely mailaka izay misy rakitra CVS mifamatotra.
Showbie dia manome fianarana maromaro ary koa fitaovana fitantanana ao an-dakilasy. Amin'ny maha mpampianatra anao dia azonao atao ny mampiasa ny rafitry ny naotiny mba hanitsiana ny andraikitr'ireo mpianatra ary hanome azy ireo valiny an-tsoratra, sary ary audio eo noho eo.
Ny Teacher Aide Pro dia misy endri-javatra telo lehibe: ny lisitry ny mpanatrika, ny boky naoty ary ny tabilao ipetrahana.
Ny boky naotiny dia manohana kilasy hatramin'ny 10 maimaim-poana. Ny fidirana amin'ireo fiasa fanampiny dia mitentina $ 0, 99 isam-bolana.
Ity dia fampiharana pro izay ahafahan'ny mpampianatra, mpianatra ary koa ny ray aman-dreny manara-maso ny zavatra toy ny naoty, ny mombamomba ny mpanatrika ary ny naoty. Izy io koa dia miasa na amin'ny Internet na ivelan'ny Internet.
Mety misy fantsom-pianarana kely alohan'ny hahalasao an'ity fampiharana ity, fa raha vao manao izany ianao dia hankasitraka ny fanaingoana azy sy ny fahatsarany.
Vaky ny naoty iho an'ny enti-mody, ny fampianarana, ny fitsapana, ny fandraisana anjara, na ny fizarazarana hafa, hanarahana ny fanatrehana ary hahazo fampahatsiahivana ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny mpianatra sy maro hafa.
Tsy fangatahana naoty matotra izany, fa raha hitahiry taratasy be dia be ianao ary hizaha toetra dia tsara raha afaka miditra amin'izy ireo na avy aiza na aiza.
Ireto ny fampiharana 10 naoty matotra izay manampy ny mpampianatra hamonjy fotoana
Ny vokatry ny fananganana renivohitra amin'ny fitomboana ara-toekarena any Nizeria
ANSU Student Portal www.coou.edu.ng 2021 Hamarino ny fanavaozana ny fampiharana
FUOYE - LASPOTECH Top-Up (Degree and HND Conversion) Program 2019/2020
Misorata anarana izao raha te hanana vintana amin'ny Transsion Holdings
Kalandrie Akademia UNILAG 2019 | Tsindrio Eto raha hijery kalandrie feno
Ny fiantraikan'ny fifandraisana amin'ny fialamboly tanjona kendrena
BSNL Voucher Extension Validity SMS 2021 Jereo ny Vaovao farany
Tags: Fampiharana best grade ho an'ny mpampianatra fanabeazana fototra, fampiharana scanner sheet bubble, grader maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana, fampiharana fampiharana kilasy google, Fampiharana gradebook ho an'ny iPad, fampiharana gradecam, scanner safidy maromaro, lakile haingana
« FUTO Fidirana mivantana fanontaniana taloha 2021 & valiny Download PDF
PTI Portal www.portal.pti.edu.ng Jereo ny fanavaozana ny fampiharana farany »